Realme X9 Pro specs inodonhedza inoratidza D1200 chip, 90Hz skrini, 108MP kamera, uye nezvimwe
Realme inonzi ichishanda pane iyo Realme X9 akatevedzana emafoni. Pamwe, iwo ane runyerekupe X9 uye X9 Pro mafoni anogona kuenda zviri pamutemo muQ2. A Chinese tipster parizvino ataura kuti kambani ichange ichiunza iyo Realme X9 Pro smartphone. Akagoverawo makiyi specs emudziyo. Iyo itsva leak inoti iyo Realme X9 Pro icharatidza inoratidzira ine punch-gomba yakamira pa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Realme X9 Pro specs inodonhedza inoratidza D1200 chip, 90Hz skrini, 108MP kamera, uye nezvimwe
Meizu 18 Pro kiyi nhoroondo yakasimbiswa pamberi pekutanga
Meizu ichange ichizivisa Meizu 18 uye Meizu 18 Pro smartphones musi waMarch 3. Mumazuva mashomanana apfuura, kambani yakasimbisa mamwe mashoko anokosha pamusoro pezvinyorwa zveMeizu 18 series. Zvakare, kuvuza kutsva kwaonekwa paWeibo kuti isangoburitsa chete kumashure kwekamera dhizaini asiwo kusimbisa zvigadziriso zvayo. Zvave kutozivikanwa kuti Meizu 18 ichange iine 6.2-inch ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Meizu 18 Pro kiyi nhoroondo yakasimbiswa pamberi pekutanga
Yenyika yekutanga Carbon Fiber smartphone inorema chete magiramu 125, asi ndizvozvo
MunaFebruary 2020, kambani inonzi Carbon Mobile yakazivisa yekutanga nyika foni yakagadzirwa kubva kabhoni fiber, iyo Carbon 1 Mako II. Payakavhurwa, kambani yakazvipira kuti itange kutumira munaJune 2020. Zvisinei, denda iri rakaitika, foni haina kuzotengeswa. Nhasi, Carbon Mobile yazivisa kuti yave kuzowanikwa online izvozvi uye kubva pakati paKurume mune yakasarudzwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve World yekutanga Carbon Fiber smartphone inorema chete magiramu 125, asi ndizvozvo
Zvinoita sekunge Apple ichangobva kuburitsa iyo iPhone 12 nhevedzano, inotungamirwa neanonyanya kushamisa iPhone 12 Pro Max, asi runyerekupe rweanomutsiva rwave kutotenderera. Isu takaunganidza zvese zvatinoziva munzvimbo imwechete, takafunga kuti titarise kuti makuhwa aya anomira sei achipokana nezvatinazvo neiyo iPhone 12. Izvo hazvina kutaura kuti kutenga chero ye… [Verenga zvakawanda ...] nezve iPhone 13 vs. iPhone 12: Misiyano mikuru kutarisira
OPPO F19 Pro, F19 Pro + 5G Makiyi Anotsanangurwa, Zvimiro, uye Mutengo muIndia Yadonhedzwa; F19 Pro + 5G Kuisa Dhayamendi 800U, 4500mAh Bhatiri
OPPO inosungirwa kuvhura iyo F19 nhepfenyuro munguva pfupi muIndia. Iyo kambani ine runyerekupe kuvhura maviri mafoni pasi peiyo F19 akateedzana. Izvi zvinosanganisira OPPO F19 Pro uye F19 Pro +. Zuva rekuburitsa mafoni maviri parizvino harizivikanwe. Tichakamirira kuziviswa zviri pamutemo, OPPO F19 akateedzana akateedzera. Kubuda kutsva kubva tipster Sudhanshu kwazivisa OPPO… [Verenga zvakawanda ...] nezve OPPO F19 Pro, F19 Pro + 5G Key Specs, Zvimiro, uye Mutengo muIndia Yadonhedzwa; F19 Pro + 5G Kuisa Dhayamendi 800U, 4500mAh Bhatiri
Realme GT 5G inoshanyira Geekbench, nzvimbo yekutengesa bhokisi ine yakajairika dhizaini
Iyo Realme GT 5G ichisvika munaKurume 4 yakaonekwa paGeekbench ine Android 11 uye 12GB RAM, inotsigira makuhwa apfuura. Iyo GT 5G, ine modhi kodhi RMX2202, ine "lahaina" yakanyorwa muchikamu chebhodhi reamai, icho chinobatanidzwa neSnapdragon 888 SoC. Iyo bhenji dhatabhesi haisanganisi chero mamwe madhizaini eGT 5G, kunyangwe Realme yakambo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Realme GT 5G inoshanyira Geekbench, mabhokisi ekutengesa ane hunyanzvi dhizaini
SD888-yakagadzirirwa muchina mu40,000 yen renji, Redmi K40 Pro yakaburitswa muJapan Rich, Japan's LTE yakazara bhendi inoenderana
Iwo achangoburwa maRedmi modhi, Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro +, yakaziviswa zviri pamutemo neXiaomi yekuChina rimwe zuva. Mutengo weRedmi K40 ine SD870 unotanga kubva pamakumi matatu nenhatu,33,000 yen muJapan yen, uye K40 Pro ine SD888 ingangoita zviuru makumi mana nezvitatu zveyen, iyo yakachipa zvakanyanya kupfuura iripo mafoni ane SD46,000. Kunyangwe iri Redmi K888 yakatevedzana, zvakazoitika kuti mukana we… [Verenga zvakawanda ...] nezve SD888-yakagadzirirwa muchina mu40,000 yen renji, Redmi K40 Pro yakaburitswa muJapan Rich, Japan's LTE yakazara bhendi inoenderana.
Samsung inozivisa 50MP ISOCELL GN2 sensor ine yakagadziriswa auto-inotarisa, yakadzedzereka-HDR
Samsung yakazivisa ISOCELL GN2 yayo, itsva 50MP mufananidzo sensor ine 1.4-micrometer (μm)-saizi pixels. Iyo inopa kusvika ku100Mp yekufungidzira, yakagadziridzwa auto-yakatarisana kuburikidza neDual Pixel Pro tekinoroji, ine simba yakasimudzwa HDR, uye yakajeka mhedzisiro kuburikidza neSmart ISO Pro. Inotsigira yakazara-HD mavhidhiyo pa480 mafuremu-per-sekondi (fps) kana 4K pa120fps. Iyo ISOCELL GN2 50MP sensor inopihwa ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung inofumura 50MP ISOCELL GN2 sensor ine yakagadziriswa auto-inotarisa, yakadzedzereka-HDR